I-OS elula, i-distro eyenziwe ngumdali wePuppy Linux | Kusuka kuLinux
I-OS elula, i-distro eyenziwe ngumdali wePuppy Linux
UBarry Kauler, umsunguli wephrojekthi yePuppy Linux, wethule esanda kukhipha inguqulo yokuhlola ye- ukusatshalaliswa kwakho kwe-Linux I-OS elula, eza nenguqulo yayo entsha "I-Easy Buster 2.2", okuyinto ivelele ngoba uzame ukusebenzisa ukuhlukaniswa kwesiqukathi ngobuchwepheshe bePuppy Linux.
Ukusatshalaliswa inikeza indlela elula yeziqukathi ukwethula izinhlelo zokusebenza noma yonke ideskithophu esitsheni esikude. Uhlobo I-Easy Buster yakhela esisekelweni sephakeji le-Debian 10. Ukusatshalaliswa kuphathwa ngeqoqo lama-graphic configurators akhiqizwe yiphrojekthi.
Isici esiyinhloko ngu-Easy Buster ukuthi yakhiwe kusuka ku-Debian 10 Buster, kusetshenziswa iWoofQ (Imfoloko yeWoof2. I-Woof-CE kungenye imfoloko yeWoof2, esetshenziselwa ukwakha iPuppy Linux).
Isici esibalulekile ngu-Easy OS lokho kufakwa ngokwesiko "okugcwele", isistimu yefayela ithatha ukwahlukanisa konke, ngokujwayelekile / njll, / bin, / usr, / proc, / sys, / tmp, njalonjalo.
Endabeni ye-Easy OS ayifakiwe kanjena. Kusukela lokhu usingatha uhlobo olulula lokufakwa ku- i-hard drive echazwe njenge imodi ye-»yokonga, ethatha ifolda eyodwa kuphela ekwahlukaneni, ukuyivumela ukuthi ihlangane nanoma yini enye ukwahlukaniswa okusetshenziselwa yona.
Izici eziphambili wokusabalalisa okuphawuleka ngokusebenza okuzenzakalelayo ngamalungelo empande, singathola ukuthi:
I-Easy OS ibekwe njengohlelo olulodwa lomsebenzisi obukhoma (ngokuzikhethela, kungenzeka ukuthi isebenze ngaphansi 'kwendawo' yomsebenzisi ongelona ilungelo)
Ukufakwa kwesistimu kwenziwa enkombeni
Inohlobo lokusabalalisa lwe-athomu lokusabalalisa (ushintsho lwemibhalo esebenzayo nohlelo) nokusekelwa kwezibuyekezo zokubuyiselwa emuva
Izicelo ezinjengeSeaMonkey, LibreOffice, Inkscape, Gimp, Planner, Grisbi, Osmo, Notecase, Audacious, ne-MPV zifakiwe kuphakheji yesisekelo.
Ngaphandle kwakho elinye iphuzu eliyinhloko ngu-Easy OS, ukuthi yakhelwe kusuka ekuqaleni ukusekela iziqukathi. Noma yiluphi uhlelo lokusebenza lungasebenza esitsheni, empeleni ideskithophu ephelele ingasebenza esitsheni.
Iziqukathi Ezilula zenzelwe kusuka phansi I-Docker, i-LXC, njll. ayisetshenziswa. Iziqukathi Ezilula zisebenza kahle ngokwedlulele cishe ngaphandle kwaphezulu: usayizi wesitsha ngasinye une-KB eminingana kuphela.
Ukusatshalaliswa kusekela amaphakheji we-SFS mega, okungamaphakeji amaningi aqoqelwe kufayela elilodwa, elibizwa ngegama lesandiso ".sfs". Lezi azikaze zikhishwe, lapho zisetshenziswa zifakwa embondweni noma kufinyelelana kusistimu yamafayela, futhi zingakhishwa ngokumane zisuswe. Lawa maphakheji anakho konke okudingayo ukuhlanganisa nokulungisa iphutha. Kukhona nomthombo we-SFS kernel njalonjalo.
I-Easy Buster 2.2 isebenzisa isisekelo sokuvumelanisa iphakethe le-Debian 10.2 kanye nakho ihlanganisa i-Linux kernel 5.4.6 y ngesici se-LockDown sinikwe amandla ukukhawulela ukufinyelela kwezinto zangaphakathi ze-kernel kusuka empandeni lapho usebenza ngemodi yekhophi yeseshini kwimemori.
Ukwakheka kufaka phakathi Izinhlelo ezintsha i-pSynclient ne-SolveSpace. Inguqulo eguquliwe ye-NetworkManager applet iyabandakanyeka. Izicelo Kuthuthukiswe iBootManager, i-SFSget, i-EasyContainerManager, ne-EasyVersionControl.
Landa bese ufaka i-Easy OS
Ukusatshalaliswa Isivele iyatholakala ukuthi ingalandwa futhi ifakwe kukhompyutha yethu noma kuhlolwe kumshini obonakalayo.
Ukuze sikwazi ukuzenza ngaye kufanele siyilande kuwebhusayithi yayo esemthethweni esingakwazi ukufinyelela kuzo isixhumanisi esilandelayo.
Isithombe se-ISO sesistimu asimele ngaphezu kwe-514 MB lapho amathuluzi amaningana asevele ahlanganisiwe.
Ngaphandle kokunye, I-Easy OS iyindlela enhle kakhulu kulabo abathanda uhlelo okugxila kufayela le- ukuhlukaniswa kwesicelo. Noma kushiwo ekuqaleni, lolu hlelo lusemodini yokuhlola ngakho-ke lungaletha izinkinga ezithile noma imiphumela yokusebenza kohlelo ayilindelekile.
Banenketho yokusebenzisa i-Easy Pyro ecwebezelayo futhi engasindi (438 MB) yize i-Easy Buster inamandla okufaka noma yiliphi iphakethe elivela endaweni yokugcina iDebian 10.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » I-OS elula, i-distro eyenziwe ngumdali wePuppy Linux
napoleon escobar kusho
Le Barry iyamangalisa, ngimlandele selokhu aqala umdlwane futhi amakhompyutha ami amadala e-elekthronikhi asebenza kahle kakhulu. Manje nge-Easy benza izimanga ngenxa ye-debian 10 futhi uma lokho bekunganele nge-xenial ifakiwe kuyamangalisa.
Phendula ku-napoleon escobar
Ngiyavuma ngokuphelele. Ngingathanda ukuqonda ukuthi yini le ndoda (uBarry Kauler) eyiqondayo futhi yenze eyami i-Puppy-style Linux, yize okuhlukile kwePuppy engikusebenzisayo kungenele okwamanje.
I-Xenom Bv kusho
Ngifuna ukuzama! .Jpg
Phendula i-Xenom Bv
Disemba 2019: Okuhle, okubi nokuthakazelisa kweSoftware yamahhala
I-Amazon, i-Apple, i-Google, ne-Zigbee bahlongoze ukudala indinganiso evulekile yamadivayisi asekhaya ahlakaniphile